FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA :: Hisoritra eny amin’ny Ceni, raha afaka efatra andro ny fironan’ny vokatra • AoRaha
FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA Hisoritra eny amin’ny Ceni, raha afaka efatra andro ny fironan’ny vokatra
LTsy hiandry ela. Ao anatin’ny telo na efatra andro eo ho eo dia mety ho efa hita soritra ny ho fironan’ ny voka-pifidianana filoham- pirenena vonjimaika. Raha ny fanazavana nataon-dRazandrabe Ernest, mpitondra tenin’ ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) dia hanomboka rahampitso alina ihany ny famoahana an’izay voka-pifidianana vonjimaika izay.
“Ao anatin’ny dimy andro no fe-potoana nomena an’ireo Ivon-toerana mpikirakira ny voka-pifidianana isaky ny distrika (Crmv) hanaterana ny vokatra eto amin’ny Ceni. Mialoha izany, dia efa azon’ireo mpikambana ao anatin’ny Crmv ireo hatao avy hatrany ny maka sary sy mandefa amin’ny alalan’ny mailaka an’ireo taratasy mirakitra ny voka-pifidianana tonga any aminy. Ora vitsy ao anatin’ny latsa-bato izany dia efa tokony hisy ny fandraisana ny vokatra», hoy izy.
Vokatra vonjimaika feno
Araka ny fanazavan’ity tompon’andraikitra ity, dia havoaka isaky ny biraom-pifidianana mihitsy io vokatra io. « Hisy ihany koa anefa ny famoahana miandalana ny vokatra ankapobeny », hoy hatrany izy. Tokony ho fantatra ao anatin’ny roa andro ny voka-pifidianana eo anivon’ireo tanàn-dehibe. Mety ho telo andro eo ho eo indray ny an’ireo faritra sy distrika.
Roa ambin’ny folo andro no fe-potoana nomen’ny lalàm-pifidianana ny Ceni hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaika. Fito andro aorian’ny fandraisana ireo vokatra rehetra manerana an’i Madagasikara no hanomboka handrafitra ny voka-pifidianana vonjimaika ireo tompon’ andraikitra ao anatin’ity vaomiera ity. Fara fahatarany izany, dia ny 19 novambra 2018 ho avy izao no hivoahan’ny vokatry ny latsa-bato amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Efatra ambin’ny folo andro hamoahana ny voka-pifidianana ôfisialy. Ao anatin’io roa herinandro io no handraisan’izy ireo an’ireo fitoriana manodidina an’izay mety ho lesoka tamin’ny fifidianana sy ny famaliana an’izany.
Misaona ny tafika